Tsika dzeCanada | Kufamba Nhau
Maria | | America, Kanadha
Uri kuenda kuCanada munguva pfupi? Uri kuronga kudzidza mwaka ipapo? Canada ndiyo imwe yenyika dzinokosheswa kwazvo kuitira vaeni vanhu vayo, kunaka kwenzvimbo dzayo nemaguta azvino. Musanganiswa weBritish, French uye Native American tsika, mune ino posvo tinopa dzimwe dzetsika dzinoda kuziva dzeCanada kuitira kuti iwe ugone kusvika pakuziva nyika yemapuru manyuchi zvishoma zvirinani. Unogona here kuenda nesu?
2 Kubata nguva mukugadzwa
12 Vhura pfungwa
MuCanada haisi tsika kukwazisa nekutsvoda padama sezvazviri mune dzimwe nyika. Kwazisai seizvi zvinogona kuonekwa sekushinga chiito, sezvo vanhu vachiwanzokwazisana nekukwazisana kana kuvabhabhadzira zvishoma kumusana kana paine kujairana.
Nekudaro, nekuda kwekuti vanhu havatsvodana kuti vakwazisane hazvireve kuti maCanada anotonhora uye ari kure. Zvakapesana chete: vanogara vachifashukira nemutsa, kuda kubatsira uye kunyemwerera pachiso chavo.
Kubata nguva mukugadzwa
Itsika yekuCanada kubata nguva zvakanyanya pamisangano yebasa uye kugadzwa kwako wega. Muchokwadi, kunonoka kwemaminetsi maviri kana matatu kunogona kutariswa kushaya nguva.Naizvozvo, zvinokurudzirwa kusvika maminetsi akati wandei nguva yakatarwa isati yakwana.
VaCanada vanozivikanwa nekurongeka uye nehunhu hwavo. Iwe haufe wakambovaona vachipinda mumutsetse kana munzira yepasi pevhu uye vakamirira nemoyo murefu nguva yavo, mumutsetse, vakamirira kuvepo pavanenge vachitenga kana kukumbira sevhisi.
MuCanada haugone kunwa doro munzvimbo dzeruzhinji senge mapaki kana mahombekombe uye kugona kuinwa mumabhawa kana mumaresitorendi zvakakosha kupa zvitupa zviviri kuratidza zera reruzhinji, zvinoenderana nedunhu iri 18 kana 19 makore. , semuenzaniso muBritish Columbia.
Kunyangwe zvisingadiwe, muCanada itsika kusiya mari yekutenga mari paresitorendi. Mari yacho inowanzo kuve 15% yeiyo huwandu, kunyangwe zvinoenderana nemhando yebasa rakagashirwa inogona kunge iri yepamusoro. Nekudaro, kumapoka akakura, iro zano rinosungirwa Mune mamwe masevhisi akadai sevanogadzira vhudzi kana matekisi, zvakare itsika kupa mari.
MuCanada, kuputa hakubvumirwe munzvimbo dzakavharwa dzeveruzhinji uye kunyangwe mita dzinoverengeka kubva panopinda chivakwa.
Iyo nyeredzi mitambo muCanada ice hockey, kunyange hazvo snowboarding kana skiing zvakare ari maviri akajairwa mitambo. Mimwe mitambo yakaita senhabvu netenisi yave kuita zviitiko zvinozivikanwa zvikuru.
Itsika muCanada kubvisa bhutsu kana uchipinda chero imba. Izvi zvinobatsira kuchengetedza zvemukati zvakachena uye kusaita ruzha kana vavakidzani vachigara pasi pevhu. Zvingaite sezvisinganzwisisike pakutanga, sezvo uchigara uchifanira kuva nemaslippers kumba, asi nekufamba kwenguva unozvijairira.
Kutaura nezvemitambo, maCanada vanofarira kuitamba panze, ndosaka vachiitira hanya zvakanyanya nezvekuchengetedza nharaunda nekudzosera marara ese. Ivo vanoziva kwazvo kuchengetedza nharaunda uye ndosaka vachigara vachipatsanura marara kuva marara ehupenyu, mapurasitiki, mapepa, makadhibhokisi nesimbi.
MuCanada, mhemberero dzakajairika izuva reCanada, apo nyika yakapfeka zvichena uye zvitsvuku uye mimhanzi yakawanda uye mafirework mafaro anoitika, uye Thanksgiving, iyo, kusiyana neUnited States, inopembererwa kutanga kwaGumiguru. Krisimasi iri zvakare rimwe zuva rakakosha kwazvo pakarenda iro rinopembererwa nemufaro munyika.
MuCanada, vanhu vanowanzo dya kare. Vanowanzo dya mangwanani-ngwanani na7 mangwanani, vanodya masikati masikati, uye vanodya manheru na17.30: 18 kana naXNUMX manheru.
Sechido chekuda kuziva, madonati kana madonati ndeimwe yemadhishi anodikanwa eCanada. Ivo vanovatora munzira dzese: kutonhora, kupisa, kuzadzwa nemakirimu uye majamu ... Anonyanya kuzivikanwa ndeaTim Hortons.
VaCanada vanhu vane hushamwari vanhu vakasununguka kune dzimwe tsika uye nekunzwa. Iyo inobatanidza uye inoremekedza nyika pamwe nenyika yakazvipira kuenzana kwevakadzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Tsika dzeCanada